“Cristiano Ronaldo Waxay Isku Mid Yihiin Diego Maradona, – Axadle
“Cristiano Ronaldo Waxay Isku Mid Yihiin Diego Maradona,
By Abdiwahab Ahmed	 On Oct 9, 2020
Cristiano Ronaldo waxa uu gaadhsiisan yahay heerkii ciyaareed ee halyeygii reer Argentina ee Diego Mardona, sida uu rumaysan yahay Mircea Lucescu oo ah tababaraha kooxda reer Ukraine ee Dynamo Kiev.
Ma Rumaysan Karaan Taageereyaasha Arsenal Waxa Uu Mikel Arteta Ku
Eden Hazard Oo Afka Furtay, Kana Haday Qosolkii & Farxaddii Uu
Mircea Lucescu oo warbaahinta la hadlay waxa kale oo uu sheegay in tababaraha Juventus ee Andrea Pirlo uu noqon doono tababare wanaagsan oo guulo u gaadha si la mid ah Pep Guardiola iyo Zinedine Zidane.
Dynamo Kiev oo tartanka Champions League ee xili ciyaareedkan ay isku group yihiin Juventus iyo Barcelona oo ay ku wada jiraan Group G oo sidoo kale ay ku wehelinayso Ferencvaros, ma qabto rajo badan oo ay ugu sii gudbi karayso wareegga xiga ee 16ka.
Laakiin Mircea Lucescu oo dhawr jeer oo uu tababare u ahaa Dynamo Kiev ay iska hor tageen Real Madrid oo uu Cristiano Ronaldo ku jiray, waxa uu amaan kula sii dul-dhacay laacibka reer Portugal iyo tababare Pirlo.
Isaga oo u warramayay wargeyska Tuttosport, waxa uu Mircea Lucescu yidhi: “Ronaldo waa Maradona oo kale, waxaanu koox kasta oo uu u ciyaarayo ku yeeshaa saamayntiisa. Inaanu CR7 waajahno aniga mar walba walaac ayay igu haysaa sababtoo ah, wuxuu jecel yahay gool-dhalinta.”
Mircea Lucescu waxa uu tilmaamay inay isku dayi doonaan inay xakameeyaan Ronaldo, waxaanu yidhi: “Waxaanu isku dayi doonaa inaanu xakamayno isaga, laakiin waxay dhibaatadu tahay in Juventus ay haysato ciyaartooyo kale sida Paulo Dybala, Alvaro Morata, Dejan Kulusevski iyo Federico Chiesa.”
Intaa kaddib, waxa Mircea Lucescu oo soo layliyey 14 kooxood oo kala duwan uu ka hadlay aqoonta uu u leeyahay Andrea Pirlo oo uu goob-joog usoo ahaa xilligii uu ciyaaraha bilaabay, markaas oo isaguna uu tababare u ahaa kooxda Brescia badhtamihii 1990meeyadii.
“Waan garanayay in Pirlo uu noqon karayo tababare, sidaas oo kale waxa ahaa Diego Simeone oo aan kusoo tababaray Pisa. Layaab iguma aha in Pirlo uu xirfaddiisa tababarenimo ka bilaabay Juventus. Isaga kuma aha doorasho khatar ah, kooxda ayaa dooratay oo taageeri doonta, aad ayaanan ugu faraxsanahay isaga.” Ayuu yidhi Mircea Lucescu.
Mar wax laga weydiiyey haddii uu Pirlo noqon doono tababare guuleysta, waxa uu yidhi: “Waxa uu noqon karaa sida Guardiola iyo ZIdane. Andrea waxa uu ahaa guuleyste kubadda cagta ah, waxaanu noqon karaa tababare weyn.”
Juventus ayaa u safri doonta waddanka Ukraine oo ay kusoo wada ciyaari doonaan Dynamo Kiev 20ka bishan.
Abdiwahab Ahmed 958 posts
Madaxweyne Farmajo waxa uu ku guuldareystay diyaarinta
Jamaahiirta Kubadda Cagta Oo Soo Doortay 30kii Ciyaartoy Ee